Google Earth waxay hagaajinaysaa habka loo wargaliyo cusboonaysiinta - Geofumadas
Google Earth wuxuu hagaajinayaa habka aad u soo sheegayso cusbooneysiintaada
Ogast, 2009 Google Earth / Maps, tabo cusub
Labadii biloodba mar ku dhowaad Google Earth ayaa soo cusbooneysiiyay sawirradooda, laakiin habka loo ogeysiiyo waxay kaliya sheegaysaa waddanka, magaalada ku dhow iyo xitaa dhowr jeer ayaa ku dhehay arrintan:
Eeg, waxaan leenahay sawirro casri ah, dhab ahaantii ma xasuusto meesha ay ku hubinayaan meeshooda meesha ay iftiinayaan ...
Waqtigan, waxay ku jiraan faylka kml ee meelaha cusub ee ku yaala bisha Agoosto.
Sidii aan hore u ogaanay, Google kaliya wuxuu ku dhawaaqayaa isbeddel weyn, arrinkaa, waxay si rasmi ah u sheegeysaa in ay jireen isbaddalo ku yimid:
Laakiin marka la eego feylka kml wuxuu muujinayaa in isbeddel yar oo ka jira dalalka kale sida:
Honduras (jasiiradaha shimbir)
Waxaad arkeysaa tusaale ahaan, Argentina, laba meelood ayaa si adag loo soo sheegaa, laakiin khariidadu waxay muujinaysaa dhibco yaryar oo aan la ogeysiin.
Isbeddelada qaarkood, sida ku xusan nambarka Navarra, waa muraayad iyo biyo damaasha, inkastoo isbeddelada kaliya lagu soo wargeliyay Basque Country iyo Costa del Sol.
Gebogebada, waa hab fiican oo lagu digayo, waxaa laga yaabaa in laga yaabo in la sameeyo faylal rasmi ah oo cusub. Qayb ka mid ah nooca: -Well, by Google, hubaal waxay weli walaacsan yihiin sababta ay horay u sameeyeen.
Post Previous«Previous PC ugu badnaan, magazine ah
Post Next gvSIG 1.9 RC1, diyaar u ah inay kala soo bixiNext »